ADZO MEDIA (TANGA INFO SAS)
9 allée des pini
+ 33 0 6 84 40 44 21
Publication director: Kossi Adzo,
Co-director : Kokou Adzo
8605 Santa Monica Blvd, Ste 92581, West Hollywood, California, 90069
Aya mazwi nemamiriro ("Chibvumirano") anotsanangura zvakajairwa uye mamiriro ekushandisa kwako webhusaiti ino ("Webhusaiti" kana "Sevhisi") uye chero ipi zvayo yakabatana zvigadzirwa nemasevhisi (pamwe chete, "Masevhisi"). Chibvumirano ichi chinosunga zviri pamutemo pakati pako ("Mushandisi", "iwe" kana "wako") uye uyu Webhusaiti anoshanda ("Operator", "isu", "isu" kana "vedu"). Kana iwe uri kupinda muchibvumirano ichi wakamiririra bhizinesi kana chimwe chibvumirano chepamutemo, unomiririra kuti une mvumo yekusunga sangano rakadaro kuchibvumirano ichi, panguva iyo mazwi "Mushandisi", "iwe" kana "wako" achareva. kuchinhu chakadaro. Kana iwe usina simba rakadaro, kana kana usingabvumirani nemitemo yechibvumirano ichi, haufaniri kugamuchira chibvumirano ichi uye unogona kusawana uye kushandisa Webhusaiti neSevhisi. Nekuwana uye kushandisa Webhusaiti uye Masevhisi, unobvuma kuti wakaverenga, wakanzwisisa, uye unobvuma kusungwa nemitemo yeChibvumirano ichi. Unobvuma kuti Chibvumirano ichi chibvumirano pakati pako neOperator, kunyangwe chiri chemagetsi uye chisina kusainwa newe, uye chinotonga kushandisa kwako Webhusaiti neSevhisi. Iyi mitemo nemamiriro emitemo yakagadzirwa nerubatsiro rwematemu uye mamiriro jenareta pa https://www.websitepolicies.com/terms-and-conditions-generator
Isu hatina chero data, ruzivo kana zvinhu (pamwe chete, "Zviri mukati") zvaunoendesa paWebhusaiti panguva yekushandisa Sevhisi. Iwe uchave nemutoro wega wekurongeka, kunaka, kutendeseka, zviri pamutemo, kuvimbika, kukodzera, uye muridzi wepfuma yeruzivo kana kodzero yekushandisa zvese zvakatumirwa. Tinogona kutarisa uye kuongorora Zviri paWebhusaiti yakatumirwa kana kugadzirwa uchishandisa masevhisi edu newe. Iwe unotipa mvumo yekuwana, kukopa, kugovera, kuchengeta, kutumira, kugadzirisa, kuratidza uye kuita Zviri mukati meakaundi yako yemushandisi chete sezvinodiwa nechinangwa chekupa masevhisi kwauri. Pasina kuganhurira chero chezviratidziro izvi kana waranti, tine kodzero, kunyangwe isiri chisungo, chekuda, nekufunga kwedu, kuramba kana kubvisa chero chinhu icho, semaonero edu, chinotyora chero chemitemo yedu kana neimwe nzira inokuvadza. kana kuti zvinopokana. Iwe zvakare unotipa rezinesi rekushandisa, kuburitsa, kuchinjisa, kugadzirisa, kushambadza kana kugovera Zvemukati zvakagadzirwa newe kana zvakachengetwa muaccount yako yemushandisi zvekutengesa, kushambadzira kana chero chinangwa chakafanana.
Isu tinoita mabhekisheni eWebhusaiti uye Zvirimo uye tichaita zvatinokwanisa kuti tive nechokwadi chekuzara uye chokwadi cheizvi backups. Muchiitiko chekutadza kwehardware kana kurasikirwa kwedata isu tichadzoreredza backups otomatiki kuti tideredze kukanganisa uye kuderera.
Zvinongedzo kune zvimwe zviwanikwa
Kunyangwe iyo Webhusaiti uye masevhisi anogona kubatanidza kune zvimwe zviwanikwa (senge mawebhusaiti, nharembozha, nezvimwewo), isu hatisi, zvakananga kana zvisina kunanga, zvichireva chero mvumo, mubatanidzwa, tsigiro, tsigiro, kana kudyidzana nechero chinhu chakabatana, kunze kwekunge zvataurwa zvakananga. muno. Zvimwe zvezvinongedzo paWebhusaiti zvinogona kunge zviri "zvakabatana zvinongedzo". Izvi zvinoreva kuti kana ukadzvanya pane chinongedzo uye wotenga chinhu, Operator anogashira komisheni yakabatana. Isu hatina basa rekuongorora kana kuongorora, uye hatibvumidze zvinopihwa, chero bhizinesi kana vanhu kana zviri muzviwanikwa zvavo. Isu hatitore chero mutoro kana mhosva yezviito, zvigadzirwa, masevhisi, uye zvirimo zvevamwe vechitatu mapato. Iwe unofanirwa kunyatsoongorora zvirevo zvemutemo uye mamwe mamiriro ekushandiswa kwechero sosi yaunowana kuburikidza nekubatanidza paWebhusaiti. Kubatanidza kwako kune chero zviwanikwa zvisiri-saiti kuri panjodzi yako.
Shanduko uye kugadzirisa
Isu tinochengeta kodzero yekushandura Chibvumirano ichi kana mazwi ayo ane chekuita neWebhusaiti uye masevhisi chero nguva pakufunga kwedu. Kana tadaro, tichadzokorora zuva rakagadziridzwa pazasi pepeji ino. Isu tinogonawo kukupa chiziviso kune dzimwe nzira sekufunga kwedu, senge kuburikidza neruzivo rwekufonera rwawakapa.
Imwe vhezheni yakagadziridzwa yeChibvumirano ichi ichashanda nekukasika panotumirwa Chibvumirano chakagadziridzwa kunze kwekunge zvatsanangurwa. Kuenderera kwako kushandisa Webhusaiti uye masevhisi mushure mezuva rekutanga reChibvumirano chakagadziridzwa (kana chimwe chiitiko chakataurwa panguva iyoyo) chinoumba mvumo yako kune shanduko idzodzo.
Kugamuchirwa kwemashoko aya
Iwe unobvuma kuti iwe waverenga ichi Chibvumirano uye unobvumirana kune ayo ese mamiriro uye mamiriro Nekuwana uye kushandisa iyo Webhusaiti neMasevhisi unobvuma kusungwa neichi Chibvumirano Kana iwe ukasabvuma kutevedzera zvirevo zvechibvumirano ichi, hauna mvumo yekuwana kana kushandisa iyo Webhusaiti neMasevhisi.
Kana uine chero mibvunzo, zvinokunetsa, kana zvichemo maererano neChibvumirano ichi, tinokukurudzira kuti utibate uchishandisa zviri pazasi:
Iyi gwaro yakagadziridzwa musi waApril 7, 2022